Ny Seranan'i Siuslaw Readies Ellicott 360SL ho an'ny tetik'ady fanamainty ao Marina
Ny seranan'i Siuslaw Readies Ellicott 360SL Mihetsiketsika ny Dragon Dredge ho an'ny tetikasan'ny Dredging Marina
Janoary 16, 2020 - Ny birao misolo tena ny seranan-tsambo iraisam-pirenena ao Oregon ao Coos Bay dia eo an-toerana miandry ny fahazoan-dàlana hanomboka ny fandotoana ny Reniranon'i Siuslaw. Ilay Siuslaw marina, tantanin'ny Seranan'i Siuslaw, dia misy sediment sy fotaka ary landy maromaro efa niforona nandritra ny folo taona mahery, ka sarotra aminy ny sambo handehanana milanja dimy kilaometatra mampifandray ny Reniranon'i Siuslaw mankany amin'ny Ranomasimbe Pasifika.
Ny Port of Siuslaw dia distrika manokana misy sarina ampahibemaso izay miankina betsaka amin'ny fizahan-tany mpizahatany, toy ny fanatanjahan-tena sy ny varotra ara-barotra, fananganana sambo, toeram-piompiana indostrialy ary tokotanin'ny RV ho an'ny fampandrosoana. Saingy, noho ny tsy fahaizan'ny mivezivezy amin'ny làlan-drano mandeha an-toerana sy ny fihenan'ny isan'ny mpanofa lakana fohy sy maharitra amin'ny lapan'ny Siuslaw marina, mpanondraka rano sy mpivarotra sambo dia voatery voatery nitondra ny asany any an-kafa.
Hampiasa a Ellicott Series 360SL Mihetsiketsika Dragon® dredge, fananan'ny fanjakana Oregon, hamita ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny. Amin'ny ankapobeny, ny Corps de Engineer amerikanina dia matetika no mitantana ny fikojakojana ny fikojakojana isan-taona; na izany aza, tsy miitatra ny fandrakofana hanoherana làlana sy marinas. Hatramin'ny vao haingana, ny seranan-tsambo kely dia tsy manam-bola hividianana ny mason'izy ireo, izay nahatonga fitifirana be teo amin'ireo marinas nanerana ny morontsirak'i Oregon. Ny vokatr'io fikorontanana io dia manohintohina ny fahafahan'ny sambo manarato ara-barotra sy fialam-boly amin'ny fanjonoana, mampisy fiantraikany amin'ny loza ara-toekarena.
Ny fanomanana farany amin'ny famoretana tsy lavitra ny faritry marina, dia voaporofo fa sarotra tokoa rehefa miady haingana ny toetr'andro ny mpihetsiketsika, ny fiovan'ny onjan-drano, ary ny taona an-dranomasina sy ny renirano izay nivezivezy teo amin'ny haavon'ny rano. Rehefa hifarana ny fanomanana dia mino ny tompon'andraikitra ao amin'ny Port of Sius Dave Huntington fa efa nandroso tsara ny zava-drehetra ary hanomboka ny fandotoana.
“Amin'izao fotoana izao, izy ireo dia manisy fantsona avy any amin'ny faritra izay hanondranana azy ireo mankany amin'ny faritra aoriana ao amin'ny seranan-tsambo izay hanondrantsika ny fotaka sy ny loto. Nitondra sambo kely avy any Coos Bay izy ireo, ary noho izany toetr'andro izany dia lava kely kokoa noho ny noheverinay fa ho vonona tanteraka ny zava-drehetra. Omaly dia nifindra tany amin'ny lalamben'i Novelli izahay, ary tokony hapetraka amin'ny faran'ny andro ny fantsona, izay midika fa efa akaiky ny hanala ny fako amin'ny faritra izahay. ”
Ny dredge tohatra mihazakazaka Ellicott® dia manana milina maotera tokana iray izay alain'ny herin'ny rano mandeha ho an'ny rano mandeha amin'ny herinaratra sy fanodinana faharoa ho an'ny fanaraha-maso fanampiny. Ny dredge Series 360SL Swinging Dragon® dia mety amin'ny fangatahana marina sy famerenana amin'ny laoniny.
Raha mila fampahalalana fanampiny momba ny tsipika fahatapahana feno ho an'ny mpanapaka sy ny fanamandoana tohatra, dia ifandraisa aminay sales@dredge.com na hamita ny antsika forme tetikasa, ary hisy olona hifandray aminao tsy ho ela.
Vaovao sy sokajy fianarana momba ny tranga